24 | novembre | 2020 | InfoKmada
Accueil 2020 novembre 24
ACM : olona 02 naiditra am-ponja vonjimaika, fahafahana vonjimaika ny 16 ambiny
InfoKmada - 24 novembre 2020 0
Olona miisa 18, ary tafiditra anatin’izany ny Tale jeneralin’ny ACM na ny Aviation Civile de Madagascar, no niakatra teny amin’ny PAC na ny Pôle Anti-Corruption noho ny kitrano an-trano eo anivon’ny ACM. Taorian’ny fampanoavana, olona 02 no naiditra vonijmaika any am-ponja ary nahazo fahafahana vonjimaika ny 16 ambiny.
FIFA : mitsahatra amin’ny asany mandritra ny 5 taona i Ahmad Ahmad
Namoaka didy ny Kaomisiona mahaleo tena misahana ny Ethique eo anivon’ny FIFA ary nilaza fa nandika ny andin-dalàna maro ao amin’ny code d’ethique ny filohan’ny CAF Ahmad Ahmad. Vokatr’izany, mitsahatra amin’ny fanatanterahana ny asany mandritra ny 5 taona ny tenany ary mandoa lamandy ihany koa .
Soavina – Atsimondrano : zazavavy 10 taona naolana lehilahy miisa 02
Zazavavy iray 10 taona no naolan’ny raikeliny sy raim-pianakaviana 72 taona teny amin’ny Kaominina Soavina Atsimondrano. Efa maro ny fanolanana nataon’ireto lehilahy roa ireto azy raha ny fijoroana vavolombelona nataony.
Mpiasam-panjakana hisotro ronono : mitaky ny « indemnité de mise à la retraite »
Miantso ny fitondram-panjakana amin’ny fandoavana ny Indemnité de Mise à la Retraite ireo mpiasam-panjakana maro efa andeha hisotro ronono ankehitriny. Tsy araka ny lalàna raha ny fanazavan’ny sendika ivondronan’ireo zokiolona ny naoty nosoniavin’ny taje jeneraly iray teo anivon’ny minisiteran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola mampitsahana ny fisitrahana ny Indemnité de Mise à la Retraite.
PPN : niakatra ny vidiny eny an-tsena
Tafiakatra 400Ar oharina amin’ny vidiny andro maro lasa izay ny vidim-bary eny an-tsena. Nahitana fiakarany tahak’izay ihany koa ny vidin’ny entana ilaina amin’ny andavan’andro nanomboka ny herinandro lasa teo. Isan’izany ny menaka, siramamy, farine.
Fifidianana: 2 ny lisitra kandidà nanendry ny mpitam-bola ny kaontin’ny fampielezan-kevitra
Ny lisitra kandidà avy amin’ny antoko IRMAR anatin’ny faritanin’Antananarivo sy ny avy amin’ny Antoko MMM anatin’ny faritanin’i Toamasina ihany hatreto no efa nanendry ny mpitam-bola ny kaontin’ny fampielezan-keviny teny anivon’ny CENI. Ny lalàna no mandidy ny fanendrena izany hisian’ny mangaragara mandritra ny fifidianana raha ny fanazavana azo.
Entan’ny mpandeha TSARADIA : nalefa any Faradofay omaly
Namoaka fampitam-baovao ny kaompania Tsaradia, taorian’ny resa-be mikasika ireo entana miisa 61 tsy tonga niaraka tamin’ireo mpandeha tany Faradofay. Nambaran’izy ireo fa resaka ara-teknika no antony tsy nahafahana nitondran’ity kaompania ity ireo entan’ny mpandeha ireo.